एक्कासी सुटुक्क सिन्धुपाल्चोक किन पुगे प्रचण्ड ? – सजल सन्देश
एक्कासी सुटुक्क सिन्धुपाल्चोक किन पुगे प्रचण्ड ?
By Sajal sandesh	 On२१ पुष २०७६, सोमबार १४:४५
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सोमबार सुटुक्क सिन्धुपाल्चोक पुगेका छन् । आरमको लागि बेला बेलामा सिन्धुपाल्चोक पुग्ने गरेका प्रचण्ड सोमबार बेलुकी पनि सिन्धुपाल्चोक पुगेका हुन् ।
उनी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटा र पार्टीका केही नेता सहित सिन्धुपाल्चोक पुगेको स्रोतको दाबी रहेको छ । यस अघि सिन्धुपाल्चोक जादा उनी रिसोर्टमा बस्ने गर्थे तर अहिले भने उनी एक व्यक्तिको घरमा बसेको स्रोतको भनाइ छ ।
उनी चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका ९ कदमबासका स्थानीय नेकपा कार्यकर्ता बलराम गिरीको घरमा बास बसेको बताइएको छ । अहिले नेकपा भित्र सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा विवा द भइरहदा एक्कासी प्रचण्ड सिन्धुपाल्चोक पुगेका हुन् । उनी खासमा आरामको लागी मात्र सिन्धुपाल्चोक पुगेको बताइएको छ ।
झापाका लोकप्रिय बिद्यार्थी नेता रवि बने अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य
चीनका गृहमन्त्रीकाे शिरमा नेपाली भादगाउँले टाेपी